Xaalada Gaarisa oo Maanta Degen
21 Nov 21, 2012 - 5:53:38 AM
Xaalada Magaalada Gaarisa ayaa maanta 21 November,2012 degen kadib howlgalo khasaare badan geystay oo labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay degmadaas ka sameynayeen Milarteriga, waxaana howlgaladii Gaarisa ka hadlay maanta Baarlamaanka Kenya.
Goobjoogayaal ku sugan Gaarisa ayaa sheegay in ganacsiga dib loo furay maanta ayna xalaadu ka duwan tahay sidii hore, waxaana halkii uu ka gubtay suuqii weynaa ee Gaarisa isugu soo baxay Dadweyne badan oo qaarkood barooranayay sheegayna inay ku hanti beeleen dabkii qabsaday suuqaas.
Xildhibaan Aadan Bare Ducaale oo laga soo doorto deegaan ka tirsan Degmada Gaarisa ayaa ka dalbaday Madaxweynaha Kenya inuu ka hadlo dhibaatadii ay ka geysteen Milateriga Kenya magaalada Gaarisa, isagoo sheegay in shacabka dalka loo sharaxo.
"Madaxweynaha Kenya waxaan ka codsanaynaa inuu ka hadlo dhibaatadii Gaarisa ka dhacday, Hadii uu ka aamusay dhibaatadii ka dhacdayTanarivo iyo askartii la dilay kama aamkusi karo dhibaatada ka dhacday Gaarisa, waayo dad badan ayaa waxyeelooyin kala duwan loo geystay" ayuu yiri Xildhibaan Ducaale.
Baarlamaanka Kenay ayaa Gudi gaar ah u saaray sidii baaris loogu sameyn lahaa dhibaatadii ka dhacday Gaarisa, kadib sadex askari oo lagu dilay degmadaas Doraad waxaana falalka ka dhacay degmadaas ka mid ah in haween badan la kufsaday.
Xidhibaan Aadan Bare ayaa sheegay in Milateriga Kenya ay iyagoo aan amar haysan ay ku dhaqaaqeen dhibaateynta dadka degen Gaarisa, waxaana falkaas si weyn u cambaareeyay mudanayaasha kale ee Baarlamaanka Kenya.